2018 BASELWORLD - Ihe na-enye obi ụtọ ịga njem na Basel -
Mmiri ọ bụla Basel bụ onye na-elekọta ndị ụlọ ọrụ 1800 na-ekpughe ihe nchebe na ọla ha na Baselword. Enweghị mkpesa banyere ọnụ ọgụgụ nke ndị ọbịa ahụ maka ahia ahia a dị mkpa, n'ihi na kwa afọ, 2017 ga-anọchite anya ndị na-ere ahịa 100.000 na ndị nnọchiteanya nnukwu ego na Watch Watch na Jewelery Show. Na 22 March 2018, ọnụ ụzọ ámá nke ngosi ga-emeghe maka ọbịbịa nke ndị ọbịa.
Jide ngwa ngwa na BASELWORD - Nyefe Basel ọrụ
Anyị EuroAirport Basel bụ naanị minit ole na ole site na ebe ngosi ahụ. Ma ịchọrọ n'ezie - dịka ọtụtụ ndị njem azụmahịa - na-eleta ihe ngosi nke onye ọrụ ahụ n'ọtụtụ ụbọchị. Ugboro ugboro, ndị njem anyị na-agwa anyị na mkparịta ụka na mkparịta ụka na ndị na-emepụta ihe, ọtụtụ echiche ọhụrụ na ụzọ ụzọ site na ụlọ ngosi ihe ngosi bụ ụbọchị kachasị sie ike n'ụbọchị azụmahịa nke ụlọ ọrụ ahụ. Ọ bụ ya mere anyị ji enye ndị ọrụ chauffeur naanị maka oge Baselworld.
Na ngwugwu mara mma ị ga-abata na ntụsara ahụ na n'enweghị nsogbu site na nkwari akụ gị ma ọ bụ site kpọmkwem na ọdụ ụgbọ elu Basel ruo nhọpụta gị. Ha na-eme njem First Class limousine Nkwepụta German ma ghara ichegbu onwe gị maka nnukwu ụgbọala ma ọ bụ ebe ọkwọ ụgbọala dị ala na ụlọ ngosi ihe ngosi ahụ. Na mgbakwunye na oge na nlezianya nke ndị njem anyị, anyị na-ewu ewu n'etiti ndị ahịa n'ihi na anyị na-aṅa ntị na ezi uche zuru oke n'oge njem ahụ.
Ọrụ ntinye akwụkwọ na-enyefe ntinye akwụkwọ ntanetị dị mfe
Anyị maara - oge bụ ego. Ọ bụ ya mere anyị nwere otu maka gị Online ntinye akwụkwọ ngwá ọrụ doziekwa. Naanị otu awa na-ebute oge, anyị dị njikere maka gị dị ka onye ọkpụkpụ na onye ọkwọ ụgbọala n'ihu onwe gị ma ọ bụ n'ọdụ ụgbọ elu na nbata na mpaghara ịpụ.
Ndị ọrụ nke Baselworld Transfer Service na-achọ ka ị nọrọ na Baselworld ma bụrụ ezigbo azụmahịa
Edere na: Ụgbọ okporo ígwè Baselworld Ntụfe ụgbọ elu Nyefe ahia ziri ezi Ọrụ mbufe
taxi.flughafen March 16, 2017 November 18, 2017 Basel, ọdụ ụgbọ Shuttle, limousine ọrụ Enweghị ihe ọ bụla
← 360 ° Nyefee ọrụ maka ndị ọbịa na Basel
2018 BASELWORLD - Na-aga njem na Basel Service →